Afhayenka Booliska oo Fahfaahiyay khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay Ceel galabta. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Afhayenka Booliska oo Fahfaahiyay khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay...
Muqdisho(Halqaran.com) Afhayenka Ciidanka Booliska dowladda Federaalka ayaa faah faahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay Qarax xoogan oo barqadii Maanta ka dhacay Barta koontarool ee laga ilaaliyo Xarunta Madaxtooyada ee Isgoyska Importooriyo Ceel-gaab ee Magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa xaqiijiyey in qaraxa loo adeegsaday gaari ay Alshabaab ka soo buuxiyeem waxyaabaha qarxa.
Sido Kale Booliska Aya Xaqiijiyey in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 9 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii Is-miidaaminta ee maanta ka dhacay nawaaxiga Madaxtooyadda Soomaaliya.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka, waxayna sheegtay inay la beegsatay kolonyo ay la socdeen saraakiil katirsan dowladda, balse ma aysan sheegin inta ku dhimatay.
Waa qaraxii labaad oo 24 saac guduhood ka dhacay Caasimadda dalka Ee Muqdisho.
Weerarkan ayaa wuxuu ku soo Aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay jireen digniino ku saabsan weeraro ka dhici kara magaala.